halkaroSolution – Halkaro
जिल्ला स्तरीय भलिबलको उपाधि चुलो रेष्टुरेन्टले हात पार्न सफल
प्रकाशित मिति : २०७४, १८ माघ बिहीबार February 1, 2018
चितवन । चितवनमा जारी जिल्ला स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि चुलो रेष्टुरेन्टले जितेको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति चितवन र जिल्ला भलिबल संघ चितवनद्वारा सहिद दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको वृहत जिल्ला स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा डीवाईसी बलुवालाई तीन शुन्यको सोझो सेटमा हराउँदै चुलोले उपाधि कब्जा गरेको हो । चुलो रेष्टुरेन्टले उपाधिसँगै ट्रफी, २० हजार रुपैयाँ […]
चितवनमा राष्ट्रिय मुवा थाई प्रतियोगिता हुने
प्रकाशित मिति : २०७४, १७ माघ बुधबार January 31, 2018
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सुपुत्र स्वर्गीय प्रकाश दाहालको स्मृतिमा चितवनमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको छ । आगामी माघ २८ र २९ गते भरतपुरको गेष्ट हाउस चौरमा दाहालको स्मृतिमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न लागिएको आयोजकले बुधबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । सो अवसरमा चौथो मुवाँथाई प्रतियोगिता तथा […]
चितवन। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री विक्रम पाण्डेले निर्वाचनको समयमा पैसा बाँडेर भोट किन्नु भन्दा विकास गरेर जनताको मन जितेर मत लिनुपर्ने बताउनु भएको छ । चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार रहनु भएका पाण्डेले जिल्लाको माडीमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै जनताले विकासप्रेमी नेतृत्व छान्ने बताउनुभयो । विगतमा कुन नेताले के काम ग¥यो […]
विकास निमार्णको पहिलो हिस्सेदारःकांँग्रेस
चितवन। नेपाली काग्रेस खुल्ला बजार अर्थनिति पछीको नेपाल अहिले सम्म भएका बिकास निमार्णको पहिलो हिस्सेदार नेपाली काग्रेस भएको नेपाली काग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । नागरिकलाई मालिक बनाउने ब्यावस्था लोकतन्त्रको हिमायती नेपाली काग्रेसनै हो भन्ने बmुभाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली काग्रेस चितवन क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार शेषनाथ अधिकारी र प्रदेश सभा […]
जनविरोधी गतिविधी गर्नेलाई मत दिनु हुदैनः मन्त्री पाण्डे
प्रकाशित मिति : २०७४, १६ मंसिर शनिबार December 2, 2017
चितवन । बन तथा भू संरक्षण मन्त्री बिक्रम पाण्डेले जनताले जनबिरोधि गतिबिध गर्नेलाई मत नदिने बताउनु भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संग चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा लोकतान्त्रीक गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका प्रतिश्पर्धा गरिरहनु भएका पाण्डेले शनिवार आफ्नै निवासमा पत्रकारहरु संग कुाकानी गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो । बाँदरमुढे घटनाको […]
यौन जिज्ञासाः भर्जिनिटी तोडिँदा मेरो यौनीबाट रगत किन अाएन ?
प्रकाशित मिति : २०७४, १३ कार्तिक सोमबार
म १८ वर्षीया विवाहित युवती हुँ। भनिन्छ, जब एक भर्जिन युवतीले पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्छिन्, रगत आउँ छ, जुन कुमारित्वको संकेत वा प्रमाण हो, तर मेरो रगत आएन। यो कसरी हुन्छ ? कसलाई यस्तो हुन्छ र कसलाई हुँदैन ? रूबी । विशेष गरेर युवतीको कौमार्य विकसित मानव सभ्यताको मात्र नभै पहिलेदेखि नै मानव यौनिकताको महत्वपूर्ण […]
राती राम्रोसँग निद्रा आउँदैन । त्यसैले मोबाइल चलाउने बानी परेको छ । कहिलेकाँही रातनै छर्लङ्ग जान्छ । यसले गर्दा अफिसमा काम गर्न पनि गाहृो हुन्छ । यसको समाधान के होला ? –साम्पास लिम्बु
प्रकाशित मिति : २०७४, ३ जेष्ठ बुधबार May 17, 2017
साम्पासजी पर्याप्त निद्राको अभावमा सिक्ने क्षमतामा कमी, मस्तिष्कको क्षमतामा कमी, धेरै मोटोपना, उच्च कोलेस्ट्रोल, मधुमेह र उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरु लाग्न सक्दछ । यसका साथैै रोग संग लड्न सक्ने क्षमतामा समेत असर पु¥याँउदछ । यसले भावनात्मक रुपमा पनि समस्या लाउँदछ । धेरैजसोलाई नकरात्मक भावनाहरु आउने, अनाबश्यक रुपमा रिस उठीरहने समेत हुने गरेको पाइएको छ । […]
मेरो श्रीमान जब यौन सम्पर्क गर्नु अघि खुब सक्रिय हुनुहुन्छ, माया पनि बढि गर्नु हुन्छ जब यौनसम्पर्क सकिन साथ उहाँ आफ्नो तालमा सुत्नुहुन्छ जुन बेला मलाई बढि मायाको आबश्यक्ता हुन्छ । उहाँ तनाबमा सम्भोग गर्न खोज्नुहुन्छ तर म भने तनाबमा सम्भोग गर्न सक्दिन । उहाँलाई कुनै मानसिक समस्या भएको त होइन, यसको समाधान के होला ? –सबु
प्रश्नको लागि धन्यबाद । तपाइको श्रीमान जब सम्भोग पाश्चात सुत्नुहुन्छ, यहाँलाई माया गर्नुहुन्न भन्ने कुरा छ यो समस्या प्रायः धेरैनै जोडीमा पाइन्छ । पुरुषले बीर्य स्खलन नगरेसम्म अत्यन्त महिलालाई केयर गर्ने, पुरुष जब बीर्य स्खलन गदर्छ त्यस पनि उसले केही चिज आफूबाट गुमाएको महशुष गर्छ । उ थाक्छ र सुत्छ पनि । हो, यहि कुरामा […]
जीवन असाध्य नरमाइलो लाग्छ, मलाई त जीवन बोझ लागिरहन्छ ? केही कुरा रमाइलो लाग्दैन म के गरु ? -राज
मानिसको सोचाई अनुसार कसैलाई जीवन रमाइलो लाग्न सक्छ कसैलाई नरमाइलो । यो सबै हाम्रो मनको कारणले गर्दा हुन्छ । मन खुशी हुँदा जीवन रमाइलो लाग्छ अनि मन दुखीहुँदा जीवन निरश लाग्छ । कुनै पनि कुरालाई बार बार दोहोरायौं भने त्यो कुरा हाम्रो आदत र ब्यक्तित्वमा परिणत हुन्छ । यहाँको प्रश्न अनुसार यहाँले नकरात्मक सोचलाई दोहोर्याई […]
मेरो Boy Friend ले अरु केटीहरु सँग बोल्यो अनि अलिक नजिक भयो कि मलाई भित्र देखि जलन हुन्छ । तर यो कुरा मैले उसलाई भन्न सकेको पनि छैन । किनकी उ नजिक हुने धेरै केटी साथीहरु मध्ये मेरो बेष्ट फ्रेन्ड पनि छ। तर मलाई भने यो कुराले तनाब भएको छ । कसरी यसबाट बाहिर आउने ? -स्वीकृती
प्रकाशित मिति : २०७३, ३० कार्तिक मंगलवार November 15, 2016
स्वीकृतीजी यहाँको प्रश्नको लागि धन्यबाद । आफ्नो प्रिय मान्छे कोहि सङ्ग बोल्दैमा, नजिकिदैमा नै जलन हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन । तर, तपाईंको व्यायफ्रेन्डले तपाईलाई बढी वास्ता राखोस भन्ने चाहाना हुनु चाहिँ सामान्य नै कुरा हो । आफुलाइ धेरै वास्ता गरोस, आफू सँग नजिक होस भन्ने चाहाना प्रायःजसो सबैलाई हुने कुरा हो । तर तपाईले तपाईंको […]